Farmaajo oo farriin tacsi ah u direy Shacabka Soomaaliyeed * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Ardaan Yare	 On Dec 28, 2019
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehellada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku naf waayey qaraxii Maanta ka dhacay Ex-kaantorool Afgooye.
“Innaa Lillaahi wa innaa Ilayhi raajicuun. Maanta waa maalin murugo badan oo muujineysa sida argagaxisadu ay bartilmaameed uga dhigteen shacabkeenna. Waxaan tiiraanyada la wadaagayaa qoysaska dadkii naga shahiiday, waxaana Alle uga rajaynayaa inuu noo bogsiiyo dhaawaca.”
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in goobta ay la beegsadeen Al-Shabaab qaraxan ay muujinayso sida ay u banneysteen dhiigga muwaadin kasta, iyadoo aan kala sooc lahayn.